अमेरिकाबाट निकालिने करोडौं मानिसमा नेपाली कति ? - Jhilko
अमेरिकाबाट निकालिने करोडौं मानिसमा नेपाली कति ?
३० चैत्र, काठमाडौ । कोरोनाभाइरसका कारण अमेरिकाले अन्य देशहरूलाई आफ्ना नागरिक फिर्ता लान सार्वजनिक गरेको आदेशले बाहिरिनेमा एसियाली देशका नागरिक बढी हुने देखिएको छ ।
यीमध्ये भारतीय र चिनियाँ नागरिक बढी हुन सक्ने देखिएको छ । विश्वमै आप्रवासीहरूको संख्या अमेरिकामा धेरै रहेको र तीमध्ये भारत र चीन लगायतका एसियाली देशका नागरिकहरूको आप्रवासन बढी रहेको छ । सन् २०१७ सम्म अमेरिकामा चार करोड बढी मानिसको आप्रवासन भएको थियो । यो विश्व आप्रवासनको २० प्रतिशत रहेको थियो ।
चार करोड ४०लाख भन्दा बढी आप्रवासनमा दुई करोड जति अवैध रूपमा बसिरहेका छन् । पु रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययन अनुसार अमेरिकाले आप्रवासनसम्बन्धी कानुन १९६० को दशकमा बनाएको थियो । त्यस यता विभिन्न किसिमका प्रावधान अन्तर्गत अमेरिका जानेहरूको संख्या निरन्तर बढदै गएको हो ।
सन् २०१७ सम्म अमेरिकामा अवैध अप्रवासीको संख्या एक करोड ५० लाख र अस्थायी तवरले कानुनसम्मत तरिकाले पुगेकाहरूको संख्या २२ लाख रहेको थियो । सो अवधिमा दुई करोड ७ लाखले अंगीकृत नागरिकता लिइसकेका छन् ।
एक करोड २३लाखले कानुनसम्मत स्थायीरूपमा बसोबास गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेको देखिएको छ । मेक्सिको बाहेक अमेरिकामा हुने सबैभन्दा बढी आप्रवासन चीन, भारत, फिलिपिन्स र एल सल्भाडोरबाट भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एसियाबाट २७ प्रतिशतको आप्रवासन हिस्सा रहेको छ ।
युरोप र क्यानाडाबाट १३ प्रतिशत, क्यारेबियन क्षेत्रबाट १० प्रतिशत, सेन्ट्रल अमेरिकाबाट ८ प्रतिशत, दक्षिण अमेरिकाबाट ७ प्रतिशत, मध्यपूर्वबाट ४ प्रतिशत र सहारा उपअफ्रिकी क्षेत्रबाट ४ प्रतिशतको आप्रवासन अमेरिकामा भएको देखिन्छ ।
मेक्सिको मात्रैको हिस्सा २५ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । अमेरिकामा हुने आप्रवासनको बढ्दो दर एसियाली देशबाट बढी हुने गरेको पु रिसर्च सेन्टरको रहेको छ ।
पु रिसर्चको अध्ययनले देखाएको प्रवृतिका आधारमा गत वर्षसम्म अमेरिकामा अवैध तरिकाले र कम समयका लागि अमेरिका जाने र त्यहाँ बस्नेहरूको संख्याको ठूलो हिस्सा एसियाली देशकै हुने देखिएको छ । कोरोनाभाइरसले गर्दा भिसा स्टेटस फेर्न नसकेका अलपत्र परेकाहरूको जमात पनि अमेरिकामा ठूलै रहेको छ ।
हालै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लग्न अटेर गर्ने विदेशी नागरिकहरूलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने एक आदेश पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अमेरिकाले विदेशी नागरिकले अमेरिकीहरूको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खतरा थपेकाले सम्बन्धित देशलाई नागरिक फिर्ता लान भनेको हो ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ –“अमेरिकाबाट आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लान अटेर वा बिनाकारण ढिलाइ गर्ने देशहरूले अमेरिकामा फैलिरहेको कोरोनाभाइरसको समयमा अमेरिकीहरूको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्वीकार गर्न नसकिने खालका जोखिम थपिरहेका छन् ।”
यो सूचनाको अटेर गर्नेलाई ‘भिसा निषेधाज्ञा’को कारबाही गर्ने जनाइएको छ । विश्वका देशहरूलाई ७ दिनभित्र आ–आफ्ना नागरिकलाई अमेरिकाबाट फिर्ता लग्न भनिएको छ । यसको पालना नभए कारबाही गरिनेछ ।
यो आदेशका कारण अमेरिकाबाट निकालिने नेपालीहरूको संख्या यकिन गर्न गाह्रो भएको सरोकारबाला निकायको भनाइ रहेको छ ।
यो आदेश अन्तर्गत नेपालले कतिलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने त्यसको निक्र्यौल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
एक 'हिरो' : जो चलचित्रमा मात्र होइन, यथार्थमै विपन्नका सारथी बने